Shoe indasitiri - Digital Manufacturing Co., Ltd.
3D Kudhinda boosts shangu indasitiri
A batch mangé Nike shangu radhindwa SL 3D aidhinda muna Shanghai pakati flagship chitoro
Mumakore achangopfuura, 3D rokudhinda zvemichina zvishoma nezvisho- rakapinda mumunda shoemaking. Kubva kanban shangu achitanga kushandisa sanding shangu anoumba, kuti kugadzirwa anoumba, uye kunyange dzapedza shangu inotsika, zvinoita sokuti 3D zvokudhinda zvigadzirwa zvemazuva ano zvinogona kuonekwa kwose kwose. Kunyange zvazvo 3D akadhindwa shangu usati aisimbisa mu shangu muzvitoro, nokuda akagadzira dzingangoitika uye customization mikana shangu 3D akadhindwa, vakawanda shangu hofori pamba uye kunze kakawanda akaedza mu zvichiitika zvemichina munda uyu mumakore achangopfuura.
Mhanyisa zvakagadzirwa ongororo uye kupfupisa kukura kutenderera
Mukutanga padariro shangu design, shangu muforoma ivhu vainyanyoshandisa chinyakare munowanika lathes, chibooreso matomu, punching michina, uye kuumbwa michina. Kurimwa kwacho yaiva nguva chaizvo unoparadza uye vakawedzera nguva inodiwa kuti afunge uye Kuongorora shangu anoumba. Kusiyana, 3D kudhinda anogona kuchinja uye nokukurumidza exchange kombiyuta shangu ivhu kupinda yokutevedzera, izvo kwete chete chinokunda zvokukwegura chinyakare urongwa, asi inodzorera magadzirirwo pfungwa nani, uye pamwe chigadzirwa kunovhenekwa uye Optimization.
Unlimited nokuda mamiriro, mukuru kunyatsoshanda uye mukana wokushandiswa
Zvichienderana zvakanakira digitaalinen nokukurumidza kugadzira, 3D rokudhinda zvemichina haringorevi nokuda yakarongeka, vachibvumira vagadziri achironga kuvhomora femero yavo. Uyezve, 3D rokudhinda mukana wokushandiswa hwezvekukurukurirana vagadziri yokugadziridza mazano uye kuderedza upfront mari nokuda chakuvhuvhu rework.
3D Kudhinda alows ari posibility pamusoro personalilzed customization
Zvinotarisirwa kuti shangu 3D akadhindwa inogona munhu zvichienderana costomization kuti vanhuwo zvavo. Kazhinji, nokuda mari urongwa, mbishi zvinhu, kutsvakurudza uye kukura, mutengo customized shangu kwakakwirira zvikuru kupfuura zvavo shangu. 3D Kudhinda anogona kuderedza mari anoumba, kupfupisa kugadzirwa kutenderera uye zvinopa zvinhu Utilisation. Mune ramangwana, riri kutarisirwa kusangana munhu zvinodiwa nevatengi pakuburitswa kwacho apo kuderedza kugadzirwa mutengo akaitwa.
Simbisai mutengi rutsoka mashoko Database
3D Kudhinda inobva 3D Data ruzivo Modelling kuti mutengi wacho makwara, uye ipapo anoshandisa 3D aidhinda kuti pave insole, inotsika neshangu kuti zvakakwana zvinoenderana mutengi rutsoka chimiro, kukurumidzisa akakwidza Optimization zvibereko mutsetse, uye vachiuya inoshanda anoratidza kuti munhu zvichienderana pachikuva yacho shangu indasitiri.
3D vaidhinda vanorumbidzwa
Munhu zvichienderana customization: 3DSL-360 & 3DSL-450
Small Batch Kugadzirwa: 3DSL-600 & 3DSL-800